I-PUPPP kunye nokunye ukukhulelwa kokukhulelwa kunye neTreaments - Iingxaki Zokukhulelwa
I-PUPPP kunye nokunye ukukhulelwa kokukhulelwa kunye neTreaments
Akuqhelekanga ukuba namava okanye ukutshintsha kolusu ngexesha lokukhulelwa. Nangona kunjalo, irhash kufuneka ihlale ixelweugqirha wakhonjengoko irhashalala ethile inokubonisa imeko eyingozi ngakumbi kubo bobabini umama nosana.
Utshintsho lolusu ngexesha lokukhulelwa
Ukukhulelwa kutshintsha umzimba womfazi kunye nowakho Ulusu lunokuchaphazeleka njengokuba. Uninzi lolu tshintsho kunye neemeko ziqhelekile ngenxa yokutshintsha kwehomoni ekukhulelweni. Ulusu lwakho lunokuba nobuthathaka ngakumbi kwizicoci okanye iisepha. Unokufumana ukoma kunye / okanye ukuluma kwiisisu sakho. Oku kungenxa yokolulwa kolusu lwakho ukusuka ekukhuleni ngokukhawuleza kwesisu sakho esenzeka ukulungiselela usana lwakho olukhulayo. Ezinye iimeko eziqhelekileyo zesikhumba zibandakanya:
ukucoca njani isacholo somgexo
Igalari yobuGcisa obuKhulelweyo
Izinto zokwenza xa unenyanga ezili-9 ukhulelwe
Xa ukhulelwe, kulula ukuba ubushushu njengoko uqhubeka nokukhulelwa ngakumbi kwiinyanga zasehlotyeni.Irash ubushushukunye nokukhuhla irhashalala ziimeko eziqhelekileyo ezibangela ukucaphuka kunye nokuphazamiseka ngexesha lokukhulelwa. Ukulwa ingxaki:
Nxiba iimpahla ezikhululekileyo nezilula.
Sebenzisa uxinzelelo olupholileyo.
Faka isicelo se-calamine lotion.
Thatha iibhafu ezifudumeleyo okanye iishawari.
Hlala ngaphakathi kwaye uphephe ukushisa.
Ukolula amanqaku yenye imeko yesikhumba eqhelekileyo eyenzeka ngexesha lokukhulelwa. Yimigca exubileyo kulusu ololuliweyo lwesisu. Amanqaku okolulwa asenokufunyanwa emabeleni, ezimpundu nasemathangeni. La manqaku anokuvela njengombala omfusa, obomvu okanye opinki kodwa aya kuphelela kwithoni yolusu okanye ukukhanya ngokuhamba kwexesha. Ukusebenzisa i-cream mark mark kunokunceda ekubambeni kunye nokubonakala.
IMelasma, ekwabizwa ngokuba yi 'mask' yokukhulelwa, yenye yemeko engxamisekileyo apho iipatches ezimnyama ezinokuthi zibonakale ebusweni bakho. Oku kungenxa yokwanda kombala obangelwa ziihomoni zokukhulelwa.
I-Linea nigra, umgca obaleka usuka kwiqhosha lesisu uye ezantsi kwingingqi ye-pubic, unokubonakala ngathi urhashaza ekuqaleni. Oku kwenzeka ngenxa yehomoni zokukhulelwa ngokunjalo.
Unokufumana ukurhawuzelela kunye / okanye irhashalala ezandleni zakho ngexesha lokukhulelwa. Oku kungabangelwa liqela lezinto ezahlukeneyo ezinje, urticaria uvela kukungabikho komzimba , okanye unganayo Ukukhawuleza kwePUPP okuqhelekileyo. Nangona kunjalo, ukurhawuzelela kunye nerhashalala kunokubonisa imeko enzulu ngakumbi njengokukhulelwa okubangelwa sisibindi esibizwa ngokuba yi-intrahepatic cholestasis. Ukuba unerhashalala okanye ukurhawuzelela okugqithisileyo ikakhulu ezintendeni zezandla zakho, kuya kufuneka uxoxe kwangoko nogqirha wakho.
I-PUPPP (okanye i-PUPPS) ibizwa ngokuba yi-pruritic urticarial papules kunye nezifo zokukhulelwa. Kukurhawuzelela okubomvu okubomvu okuhlala kwenzeka kwikota yesithathu yokukhulelwa. Ihlala iqala esiswini kwaye ngokuthe ngcembe ihambela ngasemva, ezimpundu, naseziphelweni. Rhoqo, isiqabu sinikwa ngohlobo lwezinto zokuthintela ukungcola, ezifana nee-cortisones, kunye nee-antihistamines.
Akukho ziphumo zibi ziye zabonwa ngokubhekisele kusana olukhulayo. Ukuba unerhashalala ekukhulelweni okunye, ayinyusi amathuba okuba ube nakho kwenye. Irhashalala kunye nokurhawuzelela kuya kudamba kwaye kunyamalale emva kokuzalwa kosana, ngesiqhelo kwiiveki ezimbalwa.
Irhashalala ithambekele ekukhuleni kumanqaku olulekileyo ngexesha lokukhulelwa kwaye kucingelwa ukuba yinto enokubangela ukudumba kolusu kulusu lomonakalo kumathambo adibeneyo. Nangona kunjalo, esona sizathu sokukhawuleza asikaziwa.
Olunye uhlaselo lokukhulelwa
Ngelixa ukungqubana kwe-PUPPP kunokuba yenye yezona zinto zixhaphakileyo zokukhulelwa, kukho abanye phaya. Ngelixa uninzi lungonwabisi nje ngomama oza kubakho, kukho izinto ezininzi ezinokubangelaiingxaki zomntwana osakhulayo, kokubini esibelekweni nasemva kokuzalwa.
Prurigo ukukhulelwa kwenzeka kwisiqingatha sokugqibela sokukhulelwa. Amabhampa amancinci, arhawuzelayo avela ezandleni, ezinyaweni, ezingalweni nasemilenzeni. I-Prurigo gestationis inokungonwabi, kodwa ayibangeli monakalo kumama okanye kusana. Xa ukukhulelwa kuphela, imeko iya kuphela nayo. Imvelaphi yale meko ayaziwa, kodwa kucingelwa ukuba ngabasetyhini abaye babakho ngaphambilidermatitis atopic(i-eczema) unethuba elongeziweyo lokufumana olu rash.
I-Pemphigoid yokukhulelwa Kubonakala ngathi kukuphazamiseka komzimba okuzenzekelayo okubangela ukurhawuzelela ukurhawuzelela kunye nezilonda ezinamabala. UMerck ukhankanya ukuba malunga neepesenti ezingama-25 zabasetyhini abanengxaki baya kuba phantsi kokuphinda kwenzeke kwaye iipesenti ezi-5 zabantwana abaza kuchaphazeleka (banerhashalala okanye izilonda). Ihlala isiba mandundu ukusondela okanye emva kokuzalwa, kwaye kunokuthatha iinyanga ukusombululwa. I-Pemphigoid gestationis ngaphambili yayibizwa ngokuba yi-herpes gestationis kuba irhashalala yayibonakala ifana ne-herpes simplex rash, nangona kunjalo, ayiqhagamshelekanga okanye ibangelwa yintsholongwane ye-herpes.
I-cholestasis yokukhulelwa yimeko yesibindi eyenzeka ngexesha lokukhulelwa kwaye ibangela ukurhawuzelela okukhulu kunina, okunokubangela irhashalala. Iintende zezandla kunye neebhotile zeenyawo zichaphazeleka ngakumbi. Iimpawu ezifanayo ne-jaundice, njengamehlo atyheli okanye ulusu, zikwanazo neempawu zokufumanisa isifo.
Iingozi kumama zincinci. Uya kuba nolusu olucaphukisayo kude kube kukuhanjiswa, apho imeko ihlala ihla. Nangona kunjalo, umngcipheko wokuba nemeko kwakhona uphakanyisiwe waya kufikelela kwiipesenti ezingama-70 ngokweMayoClinic.com. Ukuzalwa ngaphambi kwexesha kunye ne-meconium bobabini umngcipheko kumntwana ongekazalwa. Nokuba ukufa komntwana kusenokwenzeka kodwa kunqabile. Ngenxa yezi zizathu, ukunyanzeliswa kwabasebenzi kunokuba yeyona ndlela ilungileyo yokuthintela isiphumo esibi.
Abasetyhini abaphethwe yi-intrahepatic cholestasis yokukhulelwa banokufumana intuthuzelo ngokujoyina Iqela leNkxaso yoLuntu le-ICP kwi-intanethi. Apho, banokufunda ngakumbi ngale meko kwaye baxoxe ngamayeza kunye noloyiko nabanye abantu basetyhini abaye bafunyaniswa benengxaki.
Uninzi lwezirheshi ekuxoxwe ngazo zinokunyangwa ngamayeza e-over-the-counter (OTC). Ukusuka kwi-calamine lotion ukuya kwi-hydrocortisone creams ukuya kwi-antihistamines, ugqirha wakho uya kuncoma elona chiza lilungileyo kwimeko kunye neempawu zakho. Nokuba iziyobisi ze-OTC ezisetyenziswa ngokuqhelekileyo zinokuba neziphumo ebezingalindelekanga kumntwana okhulayo, ke qiniseka ukuba ujonga ugqirha wakho ngaphambi kokusebenzisa nantoni na.
Iindidi Zoku Ukwenza Ukwenza Isepha Malunga Iimpawu Impilo Ne Ubuhle Iphepha Lesikhwama
leliphi icandelo lokuqina komzimba yiyoga
ubhala njani i-obituary yenkqubo yomngcwabo
zithini i-50 ezichazwe ngokolandelelwano lwealfabhethi
Ulujonga njani ulungelelwaniso lwenkxaso yomntwana wakho
butywala kangakanani iwayini ebomvu